ဟဒီးဆ်: သာသနာဟူသည် ကောင်းကျိုးလိုလားခြင်းဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: သာသနာဟူသည် ကောင်းကျိုးလိုလားခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အစ္စလာမ့် နိုင်ငံရေး။ . လက်အောက်ငယ်သားများ အပေါ်တွင်ရှိသည့် အိမာမ် ခေါင်းဆောင်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဝတ္တရားများ။ .
အဗူရုကိုင်ယ်ယဟ်သမီမ် ဗင်န် အောဝ်စ် အဒ္ဒါရီ (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က သာသနာဟူသည် “ကောင်းကျိုးလိုလားခြင်းဖြစ်သည်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့က မည်သူ့အတွက်ပါနည်းဟု မေးလျှောက်ခဲ့ကြရာ ကိုယ်တော်က “အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်၊ အရှင်မြတ်၏ ကျမ်းဂန်အတွက်၊ အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်အတွက်၊ မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင်များအတွက်နှင့် အများမွတ်စ်လင်မ်တို့အတွက်ဖြစ်သည်”ဟု ဖြေကြားတော်မူခဲ့သည်။
စစ်မှန်ပြီး မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်သည့် အစ္စလာမ် သာသနာတော်သည် စိတ်စေတနာဖြူစင်စွာဖြင့် ဆုံးမသွန်သင်မှုပြုရန်၊ အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တစ်ဆူတည်းတစ်ပါးတည်းဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ထောက်ခံ၍ အီမာန် သက်ဝင်ယုံကြည်ရန်၊ ထိုအရှင်မြတ်သည် ချွတ်ယွင်းမှု အပေါင်းမှ ကင်းရှင်းကြောင်းတင်ပြရန်၊ ပြီးပြည့်စုံသော ဂုဏ်တော်များဖြင့် အရှင်မြတ်အား ဂုဏ်ပေးရန်နှင့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ထံတော်မှ ချပေးခြင်းခံရသော အရှင့်မုက္ခပါဌ်တော်ဖြစ်ပြီး အဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ကြောင်းကို ယုံကြည်မှုထားရှိရန်၊ ကျွန်တော်တို့သည် ထိုကျမ်းတော်၏ ပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီး အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးတည်းထွက်သော အာယသ်တော်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး အဓိပ္ပာယ်ပြားသော ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်သော အာယသ်တော်များကို သက်ဝင်ယုံကြည်ရန်၊ ၎င်းပြင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) ယူဆောင်လာသောအရာများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ကိုယ်တော့်အား ယုံကြည်ထောက်ခံပြီး အမိန့်ပေးထားသည်များကို အကောင်ထည်ဖော်ကာ တားမြစ်ထားသောအရာများမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်၊ မွတ်စ်လင်မ် ခေါင်းဆောင်များကို အမှန်တရားအပေါ်တွင်ရိုင်းပင်းကူညီရန်၊ ၎င်းတို့ မသိနားမလည်သော အရာများကို လမ်းညွှန်ပေးရန်၊ ၎င်းတို့မေ့လျော့နေသော သို့မဟုတ် သတိမမူမိသော အရာများကို သတိပေးရန်၊ အများမွတ်စ်လင်မ်တို့အား အမှန်တရားသို့ လမ်းညွှန်ပြသရန်၊ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဖြစ်စေ အခြားသူများထံမှဖြစ်စေ ၎င်းတို့အပေါ် ဒုက္ခတစ်စုံတစ်ရာ မကျရောက်စေရန် တတ်နိုင်သမျှ တားဆီးပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့အား မကောင်းမြစ်တား ကောင်းရာညွှန်ကြားမှုပြုရန် စသည်တို့အတွက် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အတွက် အနှစ်ချုပ် ဆုံးမသြဝါဒမှာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးတိုင်း တစ်ယောက်တိုင်းသည် မိမိအတွက် နှစ်သက်သည့်အရားကို အများမွတ်စ်လင်မ်အတွက် နှစ်သက်ရမည်ဖြစ်သည်။
သာသနာတော်၌ ကောင်းကျိုးလိုလား၍ ဆိုဆုံးမခြင်း၏ အဆင့်အတန်းသည် ကြီးကျယ်လှသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ယင်းအား သာသနာဟု အမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
သာသနာထဲတွင် အပြောအဆိုများ၊ ကျင့်ဆောင်မှုများ စသည်တို့ပါဝင်သည်။
အာလင်မ် သာသနာ့ပညာရှင်သည် မိမိတင်ပြသည့်အရာကို နားထောင်သူအား ၎င်းကိုယ်တိုင် နားလည်လာအောင် ကြိုးစားခိုင်းရမည်။ ထို့ကြောင့် နားထောင်သူက လိုလားသည့်စိတ်ဖြင့် ၎င်းအားမေးမြန်းလာစေရန် လိုအပ်သည်ထက် ပို၍မရှင်းပြသင့်ပေ။ ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် တိုက်ရိုက်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းထက် နားထောင်သူ၏ စိတ်ထဲ၌ပို၍ ထိရောက်မှုရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
ရစူလ်တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ ကောင်းမွန်သောသင်ကြားပေးသည့်ပုံစံမှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အကျဉ်းချုပ်တင်ပြပြီးနောက် ထိုအကြောင်းအရာအား အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆွဟာဗဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟွမ်) များသည် ပညာနှင့်ပတ်သက်လျှင် အလွန် စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့သည် ရှင်းပြရန်လိုအပ်သော မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆို မမေးမြန်းဘဲ ချန်ထားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
တမန်တော်မြတ်သည် “နဆွီဟသ်”ကောင်းကျိုးလိုလားခြင်းအကြောင်းကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်ဟူ၍အစပြုကာ ထို့နောက် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အတွက်၊ ထို့နောက် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) အတွက်၊ ထို့နောက် မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင်များအတွက်၊ ထို့နောက် အများမွတ်စ်လင်မ်အတွက်ဟူ၍ အစဉ်လိုက်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပထမအရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရာကို အစပြု၍ ထို့နောက် ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရာ စသည်ဖြင့် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တင်ပြရမည်။
အိမာမ်အဟ်မဒ်၏ဆင့်ပြန်ချက်၌ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က “သာသနာဟူသည် ကောင်းကျိုးလိုလားခြင်းဖြစ်သည်။”ဟု သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် မိန့်ကြားတော်မူကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း စကားတစ်ခွန်းကို ထပ်ခါထပ်ခါအလေးအနက်ထားပြောဆိုခြင်းသည် ကြားနာရသူအဖို့ ဂရုစိုက်ရန်နှင့် နားလည်သဘောပေါက်စေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
နဆွီဟသ်သည် အားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်သည်။ (အားလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးလိုလားရမည်)။
ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အစ္စလာမ့် နိုင်ငံရေး။ . လက်အောက်ငယ်သားများ အပေါ်တွင်ရှိသည့် အိမာမ် ခေါင်းဆောင်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဝတ္တရားများ။ .